Ciidamada Ammaanka oo saaka howl gal ka wada inta u dhaxeysa Muqdisho iyo Afgooye – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Ciidamada ammaanka dowladda ayaa saaka howl gal ballaaran ka wada wadada isku xirta Muqdisho iyo Afgooye, kadib markii shalay qaraxyo ismiidaamin oo loo adeegsaday gawaari wadadaas lagula eegtay kolonyo uu la socday Madaxweynaha Koofur Galbeed Shariif Xasan.
Wararka ayaa sheegaya in ciidamo isugu jira Nabadsugida iyo kuwa Milateriga ay deegaanada u dhaxeeya Muqdisho iyo Afgooye ay baaritaano ka wadaan, waxaana saaka si aad ah loo baarayay baabuurta isaga kala gooshta wadadaas.
Afhayeenka Gobolka Shabeellaha Hoose ayaa sheegay in ciidamada ammaanka ay si taxadar leh ay u baarayaan gawaarida iyo deegaanada, waxaana jira tuhun ah in qaraxyadii shalay ka dhacay wadada u dhaxeysa Muqdisho iyo Afgooye lagu diyaariyay deegaanadaas.
Dadka deegaanka ayaa sheegaya in howl galka uu saameyn ku yeeshay dhaq dhaqaaqa deegaanada u dhaxeeya Muqdisho iyo Afgooye, isla markaana dad badan lagu qab qabtay.
Mas’uuliyiin ka tirsan Maamulka Koofur Galbeed ayaa sheegay in qaraxyada oo laga war hayay ay yareysay khasaaraha, isla markaana ay ciidamada ka hor-tageen labada baabuur ee qaraxyada fuliyay.
Al-Shabaab oo sheegtay mas’uuliyada weerarka ay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ku gaarsiiyeen ciidamo dowladda iyo kuwa AMISOM oo galbinayay Madaxweynaha Koofur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan.